Imephu yezobupolitika - i-Geofumadas
Epreli, 2010 Geospatial - GIS
Yilinye yeendaba ezixubusha ezixutyushwa kumcimbi we-Matshi GISMagazine, eyaziwayo kwimeko yethu njengeGeinformatics. Yimephu ye-geopolitical, ebonisa iimpawu eziba ngumlinganiselo wokuzinza kwezopolitiko, ezentlalontle noqoqosho, ezihlaziywe kwiphephancwadi ye-17 ye-2010.
Isiphumo ngumsebenzi weeNkonzo zeengozi ze-Aon, inkampani yenkampani ye-Oxford Analytica, ngokusekelwe ekubonisanisaneni kunye nabafundi be-1000, amaziko kunye nabantu abanxulumene nokubeka esweni izikhombisi ezifana ne:
Ingozi yokungazinzi kwezopolitiko ngenxa yemfazwe, ubundlobongela, ukutshutshiswa kombuso.
Ukubandakanyeka kwamanye amazwe kwimigaqo-nkqubo yekhaya.
Ukuxhomekeka kweentlawulo okanye ukulahleka kwezimali ngaphandle kolawulo.
Iingxaki zesakhelo solawulo.
Iingxaki zokuhlala kwendalo.
Uhlobo lwemiqathango yezinto ezichaziweyo alunakucacisiwe, kodwa iziphumo ziboniswe kwimephu ecacileyo yamazwe ngemibala ephuma kwindawo ephantsi yobungozi, kwi-gray ukuya phezulu kakhulu ebomvu. Akumangalisi kwiNyakatho yeMelika, eChile naseNtshona Yurophu, apho yonke into ibonakala ibe nobungane kakhulu, ngokuchasene necala leLatin America neMbindi Mpuma.
Kungenzeka ukuba ezinye iinkqubo ziza kubuzwa ngokungathandabuzekiyo, nge-telescope yalabo bazuza kwisiphumo sokugqibela ukuseka imigaqo-nkqubo yehlabathi okanye izixwayiso kwi-investments yangaphandle; kodwa akumangalisi ukuba ngemigca eyenziwe yiColombia, lo nyaka unemibono engcono, iVenezuela ifikelela kwinani elibomvu, kwaye ikhulisa umngcipheko we-El Salvador ne-Honduras ukungazinzekanga kwangoko.
Apha unokufunda inqaku elipheleleyo kwaye apha ungabona imephu kwifomathi PDF. Kudinga ukubhalisa i-imeyile, kodwa ngaphakathi ungabonisana nezinye iindidi zolwazi.
Ekugqibeleni, ndincoma ukuba uthathe elinye iliso kwiphephancwadi, elinezinye zezihloko ezithandekayo kukuba:
Yintoni i-FME ye-2010?
Ukusetyenziswa kwe-GIS yokulawula umlilo
Kukho udliwano-ndlebe olugqithisileyo kunye noMlawuli woPhuhliso lweZoshishino lwe-1Spatial, malunga nomgangatho kunye nokulawulwa kwedatha yendawo.
Iprojekthi yaseBelgian Road Signaling Inventory.
I-cadastre kunye noshintsho lwemozulu.
Kwaye, kwinqabileyo, inqaku lisebenza kakuhle kwiGeomarketing.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iholide enkulu kwiifoto ze-10 +
Post Next Ukukhuphela idatha epheleleyo yesitishiOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 kwi "Imephu yengozi yezopolitiko"
Kuhle kakhulu, ndibeka unxibelelwano kwinqaku lakho kwiblogi!